स्याङजाको पुतलीबजार नथगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्गजाका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश डोटेलको बुवा कृष्णप्रसाद डोटेलको जग्गा रोक्का राखेको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले पुतलीबजार नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेपछि अदालत मार्फत साविक सेखाम–२, का कृष्ण प्रसाद डोटेलका सबै जग्गा रोक्का राखेको हो । पत्रकार डोटेलले पुतलीबजार नगरपालिकालाई पुतलीब...
काठमाडौं, २९ असोज । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माणाधिन सेती नदि जलविद्युत आयोजनामा एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । भिजन लुम्बिनी उर्जा प्रवद्र्धन कम्पनीद्वारा प्रर्वद्धित यो आयोजनामा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । त्यसमध्ये आज ३ वित्तीय संस्थाले ३ अर...
असोज १८, 2077 बुटवल पोस्ट
प्रदेश पाँचको राजधानी दाङ् राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव बिरुद्ध आईतबार बुटवलमा उद्योगी व्यबसायीले निशेधाज्ञा तोडेर बिरोध ¥याली प्रदर्शन गरेका छन् । उद्योगी व्यबसायी तथा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसले बिरोध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले बुटवलका बिभिन्न स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रद...
बलत्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन ! गोपाल ढकाल , मनोबिद्, पछिल्लो समय हत्या , हिंसा, बलात्कार जस्ता जखन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन। भखरै मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलत्कार पछि हत्या भयो । कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देख...
बुटवल, असोज १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बुटवल उपमहानगर कमिटीले पार्टी सदस्यहरुको नविकरण र सदस्यता विस्तारको कामलाई तिव्रता दिएको छ । पार्टी केन्द्रले पार्टी सदस्यहरुको अभिलेखिकरण र नविकरण कार्यलाई छिटो सक्ने निर्णय गरे बमोजिम बुटवल उपमहानगरले यहि असोज २० गतेभित्र सदस्यहरुको नविकरण कार्य सम्पन्न गरी माथिल्लो कमिटीमा पठाउने गरी अभियान...
बुटवल । रुपन्देहीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४७ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार बुधबार जिल्लामा १२ महिला र ३५ पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । रुपन्देहीमा पालिकागतरुपमा बुधबार पनि बुटवलमा सबै भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । बुटवल उपमहानगरमा २४ घण्टामा १८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने तिलोत्तमा नग...
बुटवल, असोज १४ । प्रदेश नं.–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसंग भर्चुवल बैठक गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा विकास साझेदारहरुसंगको सहकार्य बढाउने उद्देश्यले आयोजित भर्चुवल बैठकमा विभिन्न १२ साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्...
कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएयता सेनिटाइजरको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ। किनकि साबुनपानी नभएको अवस्थामा सेनिटाइजर दलेर पनि हातलाई भाइरसरहित बनाउन सकिने सल्लाह चिकित्सकले दिइरहेकाछन्। अहिले हरेकजसो व्यक्तिले सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसैको मौका छोपेर बजारमा अनेक थरीका सेनिटाइजर बिक्रीका लागिराखिएका छन्। तर फाइदाका लागि सेनिटाइजर उ...
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखा र जु.रे.स. मदरल्याण्ड ईङ्ग्लिस स्कुलको सहयोग तथा मणिमुकुन्द उपशाखा बुटवलको आतिथ्यमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ रानिगन्जमा तिनाउ नदिमा आएको बाढीले घरबार बगाई पिडित भएका ६ घर परिवारलाई राहत वितरण एक कार्यक्रम गरि सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रम ने रे साे मणिमुकन्द उपशाखाका अध्यक्ष सुहा बहादुर नेपालीका...
बुटवल, भदौ २ । विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी फोटोग्राफर संघ रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । १८१ औं विश्व फोटोग्राफी दिवसका अवसरमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ६० जना रक्तदाताले रक्तदान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका फोटोग्राफर महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक मह...